ZIFA: Sesivule i-Account eye Ecocash
Mabasa 25, 2014
BULAWAYO — Inhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu elizweni eyeZimbabwe Football Association isivule i-akhawunti yeEcocash kuyindlela eyokuqogelela amadola kuzulu olandela umdlalo kanobhutshuzwayo.
Ekhuluma esembukisweni we Zimbabwe International Trade Fair okhulumela inhlanganiso ye Zifa uXolisani Gwesela uthi iakhawunti ye ecocash ivulwe ngemva kokuba uzulu olandela umdlalo kanobhutshuzwayo etshengise intshukuntshu yokuba ufuna ukuphathisa linhlanganiso ukuba ithole imali.
Inhlanganiso ye Zifa ibukisa embukisweni we Trade Fair okungokwesibili iminyaka ilandelana njalo uGwesela uthi lokhu kuyingxenye yemizamo yabo eyokuthuthukisa indlela abakhokhela ngayo umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bebephiwa ithuba lokuba bakhethe amakawuso avunulwa liqembu elimela isizwe injongo kuyikuba inhlanganiso ibone ukuba yiwaphi athandwa nguzulu ukuze athengiswe ezitolo athi angathengwa angenisele inhlanganiso imali.
Sikhangele imidlalo yesigaba se Castle Premier Soccer League:
Iqembu le How Mine linqobe ele Shabanie Mine nge 2 ka 1 emdlalweni obusenkundleni ye Luveve namhla emini. Abahlohlele iHow Mine ngabathi u Mernard Mupera kanye lo George Magariro kuthi iShabanie ihlohlelwe ngu Ashley Mukwenya.
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngoMgqibelo lapho iqembu le FC Platinum lizemukela i Caps United eMandava, iBlack Rhinos izadibana le Chiredzi FC ngase Rimuka kuthi i Bantu Rovers izadlala le Chapungu eLuveve.
NgeNsonto iqembu le Highlanders lizabhuqana lele Hwange eMagumeni, iTriangle le Chicken Inn zise Gibbo, iqembu leDynamos lizadlala lele Harare City ngase National Sports Stadium kuthi i Buffaloes izangqikilana le ZPC Kariba ngase Sakubva.